နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဂျပန်အကြောင်းဆောင်းပါးမီဒီယာ။ | WeXpats Guide
အိုအိတစီရင်စု（Oita Prefecture ）ရဲ့ သာယာနေပျော်ဖွယ်ကောင်းပုံကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အိုအိတစီရင်စုတွင်အလုပ်လုပ်နေသောနည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း vol.1
အိုအိတစီရင်စု（Oita Prefecture ）ရဲ့ သာယာနေပျော်ဖွယ်ကောင်းပုံကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အိုအိတစီရင်စုတွင်အလုပ်လုပ်နေသောနည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း vol.2
နိုင်ငံခြားကျောင်းသား၊‌ ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ အိမ်မှအလုပ်သို့လာသည့်ကြာချိန် ကို ဘယ်လိုရေးကြမလဲ(How to write commuting time for part-time job resume for international students)
外国人留学生向け！介護職アルバイトから就職する方法 နိုင်ငံတကာမှကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အတွက် သူနာပြု (Kaigo ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်း) အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကို ဘယ်လိုရှာကြမလဲ For international students! How to getajob fromapart-time job
ဂျပန်မျိုးရိုးနာမည်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအသံထွက်အသံထွက်ခြင်းနှင့်ဆင်းသက်လာပုံကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း(How many Japanese surnames are there? Introducing unusual readings and origins)
နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ‌ တွေ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အတွက် ကိုယ်ရေးရာဇဝင် တင်ပြဖို့လိုပါတယ်။ ဂျပန်စာ CV ကို ပထမဆုံးရေးတဲ့အခါ အချို့လူတွေအတွက် အိမ်မှအလုပ်သို့ကြာချိန်ကို ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတ...
အလုပ် အင်တာဗျူး ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊အလုပ်ရာဇဝင် CV
အချို့နိုင်ငံတကာမှကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Kaigo ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး နဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအကြောင်းအရာကို လာရောက်လေ့လာကြပါတယ်။ တကယ်လို့ မိမိရဲ့ဘွဲ့က အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်စပ်ခြင်း ...
အလုပ် အချိန်ပိုင်းအလုပ် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊အလုပ်သင်သင်တန်းသား
ဂျပန်မျိုးရိုးအမည်တွေက တရုတ်အက္ခရာနဲ့တူပေမယ့် ကွဲပြားစွာဖတ်နိုင်တယ် (သို့မဟုတ်) မူရင်းကွဲပြားမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံခြားသားများမှာ ဂျပန်မျိုးရိုးအမည်တွေကို စိတ်ဝင်စားကြပြီး &qu...
ဂျပန်စာကို အခြားနိုင်ငံများမှမည်သို့ထင်မြင်ယူဆကြလဲ။ နိုင်ငံခြားသားများကြားမှာရေပမ်းစားသော ဂျပန်စကားလုံးများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း（What is the overseas reaction to Japanese? Introducing popular words for foreigner）
ဂျပန်ဘာသာစကားအပေါ် အခြားနိုင်ငံများမှမည်သို့ထင်မြင်ယူဆထားကြသလဲဆိုတာကို တချို့နိုင်ငံခြားသားများကသိချင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါလား။ နိုင်ငံခြားသားအများစုကယူဆထားကြတာကတော့ ဂျပန်စာဟာရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲတယ်လို့ထင်ကြပါ...
နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဂျပန်စာလေ့လာနည်းကို မိတ်ဆက်ခြင်း(For foreigners! Introducing how to study Japanese)
နိုင်ငံခြားသား တော်တော်များများက ဂျပန်စာ မတတ်လို့ စိတ်ပူနေတတ်တယ်။ ဂျပန်တွင် အရိုအသေသုံးစကားလုံးများ၊ တရုတ်အက္ခရာများနှင့် သဒ္ဒါတို့ကို တမူထူးခြားစွာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် နိုင်ငံခြားသားများ နားလည်ရန် ...
စာလေ့လာမှု ဂျပန်စာလေ့လာပုံနည်းလမ်း သဒ္ဒါ
ဂျပန်စကားနှင့် အင်္ဂလိပ်စကား မှာ မည်သည့်ဘာသာသည် သင်ယူရပိုခက်ခဲသနည်း(Which is more difficult, Japanese or English?)
ဘာသာစကားလေ့လာရာတွင် ဂျပန် နှင့် အင်္ဂလိပ်သည် အများစုသည် မတူကြသောကြောင့် ဂျပန်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်သူများသည် အင်ဂလိပ်ဘာစကားကို လက်ခဲသည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ ထို့အတူ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောသူများသည...
စာလေ့လာမှု ဂျပန်စာလေ့လာပုံနည်းလမ်း အရေးအသား သဒ္ဒါ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘဝဟန်ချက် ညီမျှစေခြင်းကြိုးပမ်းချက်ကြောင့်ရရှိစေသောအကျိုးကျေးဇူးများ(The goal of balancing work and life helps Japanese workers)
ဂျပန်အစိုးရသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဘဝဟန်ချက်ညီမျှလာသည့်အပြင် ဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သမားများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်သားဘဝ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရေရှည်တည်တံ့ခြင်း၊ အလု...
အလုပ် အလုပ်ရှာဖွေခြင်း အလုပ်အမူအကျင့်
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပုံမှန်ရက်သတ္တပတ် အလုပ်ချိန်　(Weekly working hours in Japan)
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ချက်သည် အချိန်ပိုင်း (သို့မဟုတ်) အချိန်ပြည့် အလုပ်အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားချက်များရှိကြသည်။ ထို့အပြင် သင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်လိုပါက မကြာသေးမီ...
အလုပ် အလုပ်ရှာဖွေခြင်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်